Marathon international de Tana : lasan’i Haja sy Marina ny 1.500.000 Ariary | NewsMada
Marathon international de Tana : lasan’i Haja sy Marina ny 1.500.000 Ariary
Par Taratra sur 17/10/2016
Norombahin’ny Malagasy avokoa ny voalohany sy ny lelavola natolotra, teo amin’ny andiany faha-16 amin’ny Marathon international de Tana. Nandresy tamin’izany, Andriamparany Hajanirina sy Ramanantenasoa Marina.
Tontosa, omaly alahady, ny andiany faha-16 amin’ny Marathon international de Tana. Andriamparany Hajanirina (Cosfa) teo amin’ny lehilahy ary Ramanantenasoa Marina (Cnaps), kosa ho an’ny vehivavy, ireo no nandrombaka ny medaly volamena sy ny lelavola 1.500.000 Ar avy amin’ny Vima, mpanohana ny hetsika.
Niaraka tao anaty “peloton”, hatrany i Haja sy Jean de La Croix ary Fitohiza, hatreo amin’ny 35 km nihazakazahana. Teo vao nanomboka niala tamin’izy mirahalahy i Haja ary tsy tratra intsony hatramin’ny farany. Ny traikefa nananan’i Haja, amin’ny fifaninanana goavana toa itony, ny tena tombony ho azy. Hainy tsara mantsy ny nikajy ny fomba nitondrana ilay hazakazaka, indrindra ny fitsitsiana ny aina.
Tsy nifanalavitra tamin’izay koa ny teo amin’ny vehivavy, satria nifampitady hatramin’ny farany ireo telo voalohany dia i Marina sy Landy ary Fanomezantsoa.
Marihina fa nomena 1.000.000 Ar ny faharoa ary 750.000 Ar ny fahatelo.
“Sénior” lehilahy :
1-Andriamparany Hajanirina (Cosfa) : 2 ora 30 mn 28 s
2-Rakotomalala Jean de la Croix (Crown Vakinankaratra) : 2 ora 34 mn 15 s
3-Fitohiza Miliasy (Cospn Boeny) : 2 ora 38 mn 54 s
“Sénior” vehivavy :
1- Ramanantenasoa Marina (Cnaps) : 3 ora 24 mn 21 s
2-Ratianarisoa Landinirina (Cospn Analamanga) : 3 ora 33 mn 03 s
3-Razafindravelo Fanomezantsoa (Garage Radom) : 3 ora 37 mn 19 s
-Hajanirina (Atleta) : Ambany ny lentan’ilay hazakazaka. Asa na noho ny tsy fahatongavan’ireo Kenyanina, ny nahatonga izany. Ny fikarakarana tsara saingy ny tao amin’ny “peloton” voalohany ihany no voaara-maso sy voaaro fa ny tany aoriana voaelingelina. Dingana manaraka, ny fiatrehana ny “relais de St Benoit”.
-Laurence Fischier (Karatéka) : Mahafinaritra ny miara-mihazakazaka amin’ny vahoaka malagasy satria mahay mizara fifaliana eny an-dalana. Hitako fa olona tena tia fanatanjahantena ny Malagasy. Misaotra ny mpikarakara fa tena afa-po tanteraka aho.
-Andriamahazo Norolalao (Filohan’ny FMA) : Mankasitraka ny mpandray anjara rehetra fa tontosa soa aman-tsara, ny marathon international de Tana ary tena nahafinaritra. Ny indro kely fotsiny dia ny tsy fahatongavan’ireo Kenyanina. Inoana fa ho eo ry zareo, amin’ny andiany faha-17.